पानीजहाज, भ्यूटावर आवश्यक छैनः अध्यक्ष नेपाल « Dainik Online
पानीजहाज, भ्यूटावर आवश्यक छैनः अध्यक्ष नेपाल
प्रकाशित मिति : १३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ५ : १७
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई आरोप प्रत्यारोपको थलो नबनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेपालले जनताको आवाज मुखरित गर्ने स्थानलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले लामो अध्ययनपछि अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाइएको भए पनि त्यसलाई रोकिएको भन्ने विषय आएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । “सो विमानस्थलको विकल्प के रु रिजनल हबका रुपमा अगाडि बढाउन खोजिएको हो, विमानस्थल निर्माण रोकिनुका कारण के हो रु” पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रश्न गर्नुभयो ।
मानव सूचकाङ्कका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले जनसङ्ख्याका आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारलाई आरोप लगाउनुअघि आफ्नै पालामा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा पनि स्मरण गर्न नेकपा (एमाले)लाई आग्रह गर्नुभयो। रासस
रुसले युक्रेनको व्यस्त सपिङ सेन्टरमा एक हजारभन्दा बढी मानिसलाई लक्षित गर्दै हान्यो क्षेप्यास्त्र!
काठमाडौं। युक्रेनको क्रेमेन्चुक सहरस्थित एक शपिङ सेन्टरमा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएपछि कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु भएको
उपेन्द्र पक्षको एकलौटी निर्णयले जसपामा पुनः विवाद, बाबुराम र अशोक राई ‘आउट’
काठमाडौं । मध्यरातमा बसेको जनता समाजवादी पार्टीको बैठकले मन्त्री हेरफेर गर्ने अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई
श्रीलंकामा तेल सकियो, अत्यावश्यकबाहेक सबै क्षेत्रलाई वितरणमा रोक लाग्यो
कोलम्बो। आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकाले अत्यावश्यक सेवाहरू बाहेक अन्य सेवामा इन्धन बिक्रीमा दुई साताका लागि
लहान । बोक्सी भन्दै छिमेकी एक महिलालाई मलमूत्र खुवाएको आरोपमा सिरहा प्रहरीले दुईजना महिलालाई पक्राउ
मध्यरातमा मन्त्री फेर्ने अधिकार उपेन्द्र यादवलाई, बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्ने !
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भएको छ
अमेरिकाको टेक्सासमा लरीभित्र ४२ आप्रवासी मृत फेला
टेक्सास । अमेरिकाको टेक्सासस्थित सान एन्टोनियोको बाहिरी इलाकामा एउटा लरीमा कम्तीमा ४२ जना आप्रवासी मृत